वार्षिक - हाम्रो ज्योतिष
मेष राशि हुनेहरूका लागि २०७९ साल मध्यम रहनेछ । पद प्रतिष्ठा र आर्थिक पक्ष राम्रो हुनेछ, तर शनि, बृहस्पति, राहु तथा केतुले गर्दा दुख, कष्ट भोग्नुपर्ने, मानसिक चिन्ता, इज्जत र प्रतिष्ठामा ह्रास आउनसक्छ । शत्रु बढ्ने र अनावश्यक झमेलामा पर्न सकिनेछ, तर राम्रो कर्म गरे अनावश्यक शुभ फल पाइनेछ । माघ महिनबाट शुभ फल मिल्ने र आकस्मिक लाभ, सन्तान सुख, घरमा शुभकार्य हुने र धार्मिक यात्रा समेत हुनेछ । व्यापार/व्यवसाय मेष राशिको लागि यो वर्ष आर्थिक धन फस्न सक्छ भने सेयरबजार, शिक्षाक्षेत्र तथा बिमा क्षेत्रमा गरिएको लगानी मौलाउनेछ भने धातु र स्वास्थ्यमा गरेको लगानीबाट त्यति राम्रै प्रतिफल पाइनेछैन । आर्थिक दृष्टिले असार, असोज र माघ महिना शुभ रहनेछ । प्रेम/सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा मतभेद र विश्वासमा कमी देखिनसक्छ । पैसाको कारणले आफन्त र नजिकका व्यक्तिबाट टाढिनु पर्ला । वर्षको अन्त्यमा भने प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ र घरपरिवारबाट टाढिएकाहरू नजिकिनेछन् । सन्तानको रहर गर्नेहरूले सन्तान सुख मिल्ने सम्भावना पनि रहेको छ । शिक्षा अध्ययन अध्यापनमा सामान्य नै रहनेछ, तर शनि बृहस्पति, राहु तथा केतुले गर्दा कतै नाम निकाल्न गारो पर्नेछ । व्याक लागेका विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित विषयमा उत्तीर्ण गर्न पनि समस्या आउला । शोध र टेक्निकल क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सफलता मिल्नेछ । पढाईको सिलसिलामा विदेश जानेले भने राम्रो सफलता पाउनेछन् । पेशा/रोजगार यसपालि नयाँ लगानी, जागिर वा रोजगारले खासै राम्रो फल नमिल्ला । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई भने यो वर्ष सफलता मिल्नेछ । जागिरेलाई सरुवा र बडुवाको सम्भावना पनि प्रबल छ, शनि राहु र केतुको कारणले विद्या र बुद्धिमा केही कमजोरी आउन सक्छ । स्वास्थ्य यो वर्ष चोटपटकको भय रहेको छ, हात गोडामा चोट लाग्न सक्छ । मानसिक, टाउको तथा ग्यास्टिक रोगले सताउन सक्छ, र औषध उपचारमा खर्च बढ्नेछ । खानपानमा र यात्रा गर्दा बढी सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । शुभ रङ्ग रातो, गुलाबी, पहेँलो, पर्पल र हरियो शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क १, ३, ५, ७ र ९ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा प्रत्येक बिहीबार या एकादशीको दिन विष्णु भगवानको, पूजा, जप, पाठ र उपासना गर्नाले ग्रहपीडा कम हुनेछ र भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । प्रत्येक दिन मातापिता तथा पितृ देवताको आशीर्वाद लिनाले अधिक सफलता मिल्नेछ । वर, पिपल या अन्य वनस्पतिहरूको वृक्षारोपण गर्नाले पनि ग्रहबाधा कम हुने र भाग्यमा वृद्धि हुनेछ ।
वृष राशिलाई यो वर्ष मिश्रित फल नै मिल्नेछ । देवगुरु बृहस्पतिको प्रभावले शुभ फल मिल्नेछ । सुख सुविधामा बढोत्तरी हुने, शिक्षाक्षेत्र र न्यायिक कार्यमा विशेष सफलता मिल्नेछ भने राहु र शनिको प्रभावले भने हानी नोक्सानी, चोटपटकको भय, सम्पत्तिमा विवाद, शत्रु बढ्ने जस्ता नराम्रा फलको सामना गर्नु पर्ला । जन्म कुण्डलीमा शनिग्रह बलवान हुने हरूले भने शनि ग्रहको नराम्रा फलको सामना गर्नु पर्दैन । व्यापार/व्यवसाय यसवर्ष व्यापार व्यवसायमा विशेष गरि कृषि, पशु, शिक्षाक्षेत्र, सूचनाप्रविधि लगायतका विषयमा लाभ मिल्नेछ, तर आफन्त सँगको आर्थिक लेनदेनको कारणले दूरी बढ्न सक्छ । शेयर बजारको लगानी पनि निकै राम्रो रहन सक्छ । घरजग्गा र निर्माणको क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल पाइनेछ । आर्थिक दृष्टिले साउन, कार्तिक, कार्तिक र फाल्गुन महिना बढी राम्रो रहनेछ । प्रेम/सम्बन्ध प्रेमी वा प्रेमीकाको सम्बन्ध कायम राख्न सहनशीलता हुन आवश्यक रहन्छ, नत्र चाँडो निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउनु पर्ला । विपरीत वर्ग प्रति आकर्षण पनि बढ्नेछ । आफ्नो कामको सिलसिलामा घर परिवारबाट टाढा हुनु पर्ने बाध्यता आउनसक्छ । शिक्षा यो वर्ष विद्यार्थीहरूले परीक्षामा राम्रै अङ्कले सफलता हासिल गर्न सक्छन् । अनुसन्धान र अध्यात्म क्षेत्रका विद्यार्थीले उच्च सफलता पाउनेछन् । गणित र व्यवस्थापन विषय भने कमजोर रहन सक्छ । पेशा/रोजगार यो वर्षको ग्रह गोचर हेर्दा धेरै मिहिनेत र सङ्घर्ष गर्नु परे पनि नयाँ रोजगार पाइने र वैदेशिक क्षेत्रबाट पूर्ण सफलता मिल्नेछ । सरकारी जागिर खान खोज्ने हरूको लागि भने बढी मेहनेत गर्नु पर्नेछ । सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा आवद्ध जातकहरूलाई अधिक सफलता मिल्नेछ । ठेक्का पट्टा र दलाली काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि राम्रो सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा समस्या बढ्न सक्नेछ । आफ्नै सानो हेलचेक्र्याइँका कारणले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ला । प्रजनन र हड्डीमा समस्या देखिन सक्छ, तर नियमित खानपिन, व्यायाम र योग गर्नाले रोगहरू विस्तारै सुधार उन्मुख हुनेछन् । शुभ रङ्ग सेतो, कालो, खैरो र घ्यू रङ्ग शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क २, ४, ६, र ८ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय ग्रह पीडाबाट बच्न र शुभ फल प्राप्त गर्न मंगलबार गणेशजीको दर्शन / पूजा गरे चाँडै सफलता पाइनेछ । रोगी र असहायलाई सहायता गर्नाले ग्रह पीडा कम भई भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि विघ्नहर्ता गणेश भगवानको स्मरण गर्नाले राम्रो हुनेछ ।
२०७९ साल मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूलाई यो वर्ष सामान्य नै रहनेछ । राहुको गोचरले राम्रो फल दिने र नयाँ कार्यको थालनी र जागिर पाइनेछ । रोकिएका वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू सहजै अघि बढ्नेछ । शनिको अढैया दशा, केतु र बृहस्पतिको नकारात्मक प्रभावले झुटा आरोप, वादविवाद, डर र चिन्ता बढ्न सक्छ, स्वास्थ्य प्रतिकूल रहनसक्छ तर जन्म कुण्डलीमा बृहस्पति र शनिग्रह राम्रो पोजिसन रहेमा शुभ फल पाइनेछ । व्यापार/व्यवसाय यो वर्ष मिथुन राशिका जातकहरूलाई व्यापार / व्यवसायबाट लाभ नै मिल्नेछ । नयाँ ठाउँमा लगानीको अवसर मिल्नेछ । प्राविधिक, फेन्सी तथा सजावटका क्षेत्रमा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ । सेयर बजार अन्तर्गत वाणिज्य क्षेत्र बढी राम्रो रहला । यदि जन्म कुण्डलीमा शनि ग्रह स्वगृही, उच्च, मित्रगृही छ भने शनिको कृपाले निर्माण, धातु, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक र टेक्नोलोजी क्षेत्रबाट शुभ फल मिल्नेछ । आर्थिक दृष्टिले वैशाख, भाद्र, र मंसिर महिना शुभ रहनेछ । प्रेम/सम्बन्ध यसपालि नयाँ सम्बन्ध नजोडेकै राम्रो हुन्छ । प्रेम र मित्रताको बन्धमा दूरी बढ्न सक्छ, साथै पुरानो र नयाँ सम्बन्धमा मनमुटाव आउने र आफन्त पनि टाढिन्छन्, तर जन्मकुण्डलीमा सप्तम भावको पोजिसन राम्रो भएमा आफ्नो अनुकूलताको शुभ फल पाइनेछ । शिक्षा अध्ययन र अध्यापनमा रूचि घट्नेछ । विद्या र बुद्धिको विकास नहुन सक्छ । विदेशिएका विद्यार्थीहरूले भने स्वदेश भन्दा बढी सफलता हासिल गर्नेछन् । आर्किटेक्चर, विज्ञान र स्वास्थ्य क्षेत्रका शिक्षार्थीहरूलाई बढी सफलता मिल्नेछ । पेशा/रोजगार यो वर्ष नयाँ रोजगार पाइने र ठाउँ परिवर्तनको योग रहेको छ । सरकारी पद र ठूला सङ्घ संस्थामा आवद्ध पनि हुन सकिनेछ । वादविवादमा नपरेकै जति हुनेछ, अन्यथा दुख पाइने र अपजस खेप्नु पर्ला । आफ्नो पेशाबाट राम्रो फाइदा मिल्नेछ तर, विपक्षी भने बढ्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य मानसिक चिन्ता र समस्या बढ्न सक्छ । रक्त विकार र शीर्ष पीडाको भय पनि उत्तिकै रहनेछ । ग्यास्टिकको समस्या बढ्न सक्छ त्यसैले खानपिनमा विशेष ध्यान दिनु र व्यायाम गर्नु हितकर हुनेछ । मंसिर महिनाबाट स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । शुभ रङ्ग हरियो, निलो, खैरो र सेतो शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क १, ३, ६, र ८ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय मंगलबार विघ्नहर्ता गणेशजी र शनिवार हनुमानजीको व्रत, दर्शन तथा पूजा गर्ने, गरिब तथा अपाङ्गहरूलाई सहयोग गर्ने साथै शनि ग्रहको शान्ति, जप, पाठ, पूजा र हवन आदि गराउनाले ग्रह पीडा कम भई अधिक सफलता मिल्नेछ, तर सत्कर्म गर्नेहरूलाई नवग्रहको कृपा सदैव रहन्छ ।
२०७९ सालमा कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सुखदायी नै रहनेछ । बृहस्पतिको अनुकूलताले वर्ष भरिनै भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । सन्तान सुख मिल्नेछ । शुभ, धार्मिक यात्रा र मङ्गल कार्यको योग पनि रहनेछ । व्यवसायीक सन्दर्भमा नयाँ व्यक्ति र नयाँ कम्पनीसँग आवद्ध भइनेछ । वैदेशिक यात्रा हुनेछ, तर विश्वासिलो व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा नचाहँदा नचाहँदै चिसोपना आउनसक्छ । व्यापार/व्यवसाय यो वर्ष व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नु फलदायी नै रहने छ । प्रविधि, शैक्षिक क्षेत्र, खानेकुरा, पर्यटक र शेयर कारोबार राम्रो रहने छैन । घर जग्गामा लागेकाहरूलाई भने त्यति राम्रो नरहन सक्छ । आर्थिक दृष्टिले वैशाख, जेठ, असोज महिना बलियो रहनेछ भने असार र पुष महिना कमजोर रहनेछ । प्रेम/सम्बन्ध यो वर्ष प्रेममा परेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सक्ने र घर परिवारको समर्थन पनि लिन सक्छन् । वैशाख र साउन महिनामा तपाईंलाई कसैले मन पराउन सक्छन् र टाढिएका मित्रसँग पुन: सम्बन्ध गाँसिन सक्छ घरपरिवारसँग सम्बन्ध पनि बलियो नै हुनेछ । शिक्षा यो वर्ष अध्ययन र अध्यापनको लागि राम्रो रहेको छ । अड्कीएका विषय उत्तीर्ण गर्न सकिनेछ । वैदेशिक क्षेत्रका शिक्षार्थीहरूलाई पनि राम्रै सफलता मिल्नेछ । स्वस्थ, प्राविधिक र इन्जिनियरिङका शिक्षार्थीहरूलाई अधिक राम्रो हुने र देश विदेशको यात्रा तय हुनेछन् । पेशा/रोजगार स्वास्थ्य, सेवा र निर्माणका विषयमा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई राम्रो लाभ मिल्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले राज्यबाट मान सम्मान पाउनेछन् । शिक्षक तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई सरुवा र बढुवा हुनसक्छ । वैदेशिक रोजगार र भने कमजोर हुनेछ । स्वास्थ्य स्वास्थ्य सामान्य नै रहनेछ । घरपरिवारको औषध उपचारमा खर्च बढ्नेछ । नसा तथा हड्डीको समस्या बढ्न सक्छ, अत: आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सतर्कता अपनाउनु उचित होला । शुभ रङ्ग सेतो, गुलाबी, कालो, पहेँलो र खैरो शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क २, ५, ७, र ९ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय गौ सेवा या वृद्धहरूलाई सहयोग गर्नाले मानसिक शान्ति मिल्नेछ । सोमबार शिवजीको दर्शन, पूजा र आरधना गर्नाले ग्रह पीडा कम हुनेछ । प्रत्येक दिन निमुखा प्राणी तथा चराचुरुङ्गीलाई खानेकुरा दिनाले पनि भाग्यमा वृद्धि हुनेछ
सिंह राशि हुनेहरूका लागि २०७९ साल सुखदायी नै रहनेछ, वर्ष भरीनै शनिको कारणले भौतिक सुख मिल्ने र वैदेशिक कार्य राम्रो हुनेछ, तर स्वदेशको कमाईले व्यवहार धान्न गारो पर्ला । कसै कसैलाई सन्तान सुख मिल्ने र भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । बृहस्पति र राहुको कारणले गरेको कार्यमा ढिलासुस्ती हुने, चोटपटकको भय रहने, विद्या र बुद्धि पनि ह्रास आउनेछ । व्यापार/व्यवसाय यो वर्ष आर्थिक पक्ष सबल नै रहने देखिन्छ । पर्यटन, निर्माण र घरजग्गाको कारोबार फस्टाउनेछ । पुरानो ऋण तिर्न सकिनेछ, तर आय भन्दा व्यय बढ्नेछ । सेयर बजारको कारोबार भने सुझबुझमा भर पर्छ । प्राविधिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल पाइनेछ, तर खाद्यान्न र तरल पदार्थको व्यवसायबाट नोक्सानी हुन सक्छ । जेठ, असार र असोज महिना शुभ छ । प्रेम/सम्बन्ध सबैसँगको सम्बन्ध सामान्य नै रहनेछ । पतिपत्नी या प्रेमी प्रेमिकाका बिच समझदारी बढ्ने र सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनेछ । शत्रुबाट छुटकारा पनि मिल्नेछ । वर्षको उत्तरार्धमा नयाँ प्रेम प्रसङ्गमा नपरेकै राम्रो हुनेछ, अत: विवाद बढ्न सक्छ र आफ्नो कार्य क्षेत्रका सहकर्मीसँग भने मनमुटाव पनि बढ्नसक्छ । शिक्षा यो वर्ष पठनपाठनमा जाँगर घट्नेछ । विशेषगरि कला, साहित्य र मनोरञ्जन विषयका विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट नतिजा पाउनेछन् । रोकिएका अधुरा विषयमा पनि उत्तीर्ण हुन सकिनेछ । वैदेशिक विद्यार्थीहरूले भने अलि बढी मिहिनेत र संघर्ष गर्नु पर्ला । शैक्षिक क्षेत्रबाट साउन, असोज र चैत्र महिनामा अधिक सफलता मिल्नेछ । पेशा/रोजगार यो वर्ष वैदेशिक व्यापार या रोजगारीकोआम्दानी घट्नेछ । नयाँ ठाउँमा लगानीको अवसर मिल्नेछ भने नयाँ कार्य, पद र प्रतिष्ठा समेत पाइनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिनेछ । हार्डवेयर र स्वास्थ्य पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरूको लागि निक्कै राम्रो हुनेछ । स्वास्थ्य यो वर्ष रक्तचाप, हृदय र नशाको समस्या बढ्न सक्छ, अत: स्वास्थ्यप्रति सजग रहनु होला । छाला तथा प्रजनन समस्या हल हुनेछ । शुभ रङ्ग रातो, निलो, खौरो र गुलाबी शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क १, ५, ६ र ९ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय ग्रह पीडाबाट बच्न राहु र बृहस्पतिको शान्ति गर्दा राम्रो हुनेछ । भगवान श्रीकृष्ण र लक्ष्मीजीको दर्शन, पूजा, आरधना, पाठ गर्नाले राम्रो हुनेछ । सत् मार्गमा हिड्ने र सत्य बोल्नेलाई भगवानको आशीर्वाद प्राप्त भई भाग्यमा वृद्धि हुनेछ ।
कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो वर्ष माध्यम फलदायी रहनेछ । देवगुरु बृहस्पति शुभ रहने हुनाले समस्याहरूको हाल हुन सक्नेछ । सामाजिक र राजनैतिक कार्यमा मन जानेछ । भौतिक सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुनेछ र अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । राहु र केतु अशुभ फल दिन सक्छ भने शनिले गर्दा सन्तान सुख नमिल्ला । वर्षको अन्त्य तिर अधुरा कामहरू पूरा हुन सक्छ । व्यापार/व्यवसाय यो वर्ष व्यापार तथा व्यवसायबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएला । घरजग्गाको कारोबारबाट फाइदा मिल्नेछ भने वर्षको उत्तरार्धमा कृषि, पशु र पर्यटकीय क्षेत्रको लगानी फलदायक हुनेछ । सेयरबजारमा लगानी गर्नेहरू भने सचेत रहनुपर्छ । वैशाख र भाद्र महिनामा धनमाल हराउन सक्छ सजग रहनु होला । आर्थिक दृष्टिकोणले असार, साउन, र फाल्गुन महिना शुभ रहनेछन् । प्रेम/सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा सफलता मिल्नेछ । प्रेम सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु राम्रै हुनेछ । साउन महिनामा नयाँ व्यक्तिसँग नयाँ सम्बन्धको सुरुवात हुन सक्छ । असार महिनामा प्रेमी र प्रेमिकाका घर परिवारबाट केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि सिर्जना हुनसक्छ । आफन्त, दाजुभाइ तथा घरपरिवारसँगको विवाद भने समाप्त हुनेछ । शिक्षा वर्षको सुरुमा शिक्षाक्षेत्र त्यति राम्रो नरहला मङ्सिरबाट भने राम्रै रहन सक्छ । आई. टी. र वाणिज्य विषयका विद्यार्थीहरूलाई विशेष लाभ मिल्नेछ । व्यवस्थापन र भाषाका शिक्षार्थीहरूलाई भने यो वर्ष कमजोर सावित हुनसक्छ । शैक्षिक क्षेत्रबाट साउन र कार्तिक महिनामा अधिक सफलता मिल्नेछ । पेशा/रोजगार यो वर्ष विशेष गरि वैदेशिक क्षेत्रका काम बन्ने र रोजगारीको राम्रो अवसर मिल्नेछ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीको जागिरमा बढोत्तरी तथा पदोन्नति हुने योग छ । पत्रकारिता, चालक र पहिरन पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई अधिक सफलता मिल्नेछ । संयुक्तरुपमा गरिएको लगानी फलदायी नहुन सक्छ । स्वास्थ्य यो वर्ष राहु र केतुको कारणले स्वास्थ्यमा समस्या बढ्न सक्नेछ । यात्रा गर्दा वा गाडी चलाउँदा चोटपटकको भय छ र खानपिनमा पनि विचार पुर्याउनु आवश्यक छ । शरीरले दु:ख पाउने र घर परिवारको स्वास्थ्यमा थप खर्च बढ्नेछ । त्यसैले स्वास्थ्य प्रति सचेत रहनु होला । शुभ रङ्ग निलो, रातो, खरानी, र हरियो शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क १, ३, ६ र ९ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय राहु र केतुको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न भैरवजीको दर्शन, पूजा र उपासना गर्नाले ग्रह पीडा कम हुने र भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि दैनिक रोगीलाई सेवा गर्नाले राम्रो हुनेछ । जन्म दिनमा वृक्षारोपण गर्नाले पनि ग्रह वाधा कम हुनेछ । प्रत्येक दिन गुरु तथा माता पिताको आशीर्वाद लिई सत्य बोल्दिनाले पनि चाँडै सफलता पाइनेछ । - ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल 977-9849559502 (अधिक जानकारीका लागि )
तुला राशि भएका व्यक्तिहरू का लागि २०७९ साल मिश्रित फलदायी वर्ष रहनेछ । बृहस्पति, शनि, राहु र केतुको प्रभावले वर्ष भरिनै त्यति राम्रो फल नमिल्ला र गरेको कार्यमा उल्झन र चोटपटकको भए पनि रहनेछ, तर भौतिक सुख भने मिल्नेछ । बृहस्पति, शनि, राहु र केतुको ग्रह शान्ति गर्दा भने शुभ फल मिल्नेछ । यदि जन्म कुण्डलीमा बृहस्पति र शनि उच्च, स्वगृह तथा मित्रगृह ग्रहहरू भए अधिक शुभ फल मिल्ने निश्चित छ । व्यापार/व्यवसाय व्यापार वा व्यावसायिक दृष्टिले एस वर्ष नयाँ ठाउँमा लगानी नगरेकै जाती हुनेछ । सामूहिक रूपमा नयाँ व्यक्तिसँग व्यवसाय सुरु गर्न सकिनेछ । शेयर बजारमा गरेको लगानीले पनि सफलता दिलाउनेछ । मेसिनरी वस्तुमा गरेको लगानीले सफलता नमिल्न सक्छ । नगद सापटी लिनेहरू पनि टाडीन सक्छन् । व्यवसायीक दृष्टिले श्रावण, भाद्र र पुष महिना राम्रो हुनेछ । प्रेम/सम्बन्ध दाम्पत्य जीवन तथा प्रेमी / प्रेमिकाका सम्बन्धमा सामान्य उतारचढाव आउनसक्छ । प्रेमी जोडीको सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न पनि गाह्रो होला, तर जन्मकुण्डलीमा सप्तम भाव बलियो भएका व्यक्तिहरूलाई भने कुनैपनि सम्बन्ध नराम्रो हुँदैन । शिक्षा यो वर्ष शैक्षिक क्षेत्रबाट त्यति राम्रो प्रतिफल नमिल्ला । मनमा चञ्चलता बढ्नाले पढाईमा ध्यान दिन नसकिएला । गणित र व्यवस्थापन विषयका विद्यार्थीहरू बढी कमजोर हुनसक्छन् । इन्जिनियरिङ् विषयका विद्यार्थीहरूलाई भने विशेष सफलता मिल्नेछ । भाद्र र फागुन महिनामा रोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न भने सकिन्छ । पेशा/रोजगार जागिरे हरूलाई अबजस आइलाग्न सक्छ । पेशा वा रोजगारमा दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा जनताले असमर्थता जनाउन सक्छन् । सामूहिक व्यवसायमा पनि खासै राम्रो हुनेछैन । वैदेशिक रोजगारमा लागेकालाई भने राम्रै हुनेछ । स्वास्थ्य यो वर्षमा शरीरमा आलस्यता बढ्नेछ । घर परिवारको स्वास्थ्यमा धन खर्च हुनेछ । रक्त सञ्चारको समस्या पनि बढ्न सक्छ, अत: नियमित व्यायामको अभ्यासले शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग गर्नेछ । शुभ रङ्ग सेतो, निलो, कालो र पहेँलो शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क ३, ५, ६ र ८ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय प्रत्येक विहीवार लक्ष्मीनारायणको पूजा र उपासना गर्नाले ग्रह पीडा कम भई शुभ फल मिल्नेछ । बिहीवार कालो पहिरन नगरेकै राम्रो हुन्छ । बृहस्पति, शनि, राहु र केतुको ग्रह शान्ति गर्ने । आफ्नो जन्म दिनमा रोगीलाई साथ र सहयोग गर्नेहरूलाई भने ग्रह पीडा कम भई अधिक शुभ फल मिल्नेछ । प्रत्येक दिन आफ्नो इष्ट देवताको स्मरण गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वृश्चिक राशिका जातकका लागि समग्रमा २०७९ साल शुभ फलदायी रहनेछ । बृहस्पति र राहुको प्रभावले वर्षभरी नै राम्रो फल दिने र भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । आँटेको र गरेको कार्यबाट सफलता मिल्नेछ । नसोचेको ठाउँबाट चमत्कारी लाभ पनि मिल्नेछ । माघ २७ गते सम्म जन्म कुण्डलीमा शनि कमजोर हुनेलाई भने शनि अढैयाको प्रभावले आरोपप्रत्यारोप, धन हानी, कार्यमा ढिलासुस्ती, आर्थिक नोक्सानी जस्ता फल भोग्नु पर्ला । व्यापार/व्यवसाय वैदेशिक लगानी र वित्तीय संस्थामा गरेको लगानीबाट निकै सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्य व्यवसाय, घर जग्गामा गरेको लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल पाइनेछ, तर सेयरबजार र धातु जन्य सामानको व्यवसायबाट नोक्सानी हुन सक्छ । असोज र पुष महिनामा धन हानी हुनेछ भने वैशाख र माघ महिनामा अधिक लाभ मिल्नेछ । प्रेम/सम्बन्ध यो वर्ष प्रेम प्रसंगका लागि सामान्य रहेको छ अतः प्रेममा सफलता प्राप्त गर्न धैर्य र सत्यताको आवश्यक पर्दछ । कसै कसैको जन्मकुण्डलीमा गण गुण राम्रो हुन गाएमा प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सकिन्छ । शिक्षा स्वदेश तथा विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रबाट मिहिनेत अनुसार सफलता मिल्नेछ । विज्ञान र गणित विषयका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सफलता मिल्नेछ, तर वैशाख र जेठ महिनामा विद्यामा ह्रास आउनसक्छ । पेशा/रोजगार नयाँ जागिरको अवसर मिल्नेछ र वैदेशिक रोजगारको सम्भावना पनि रहेको छ । पर्यटन र प्राविधिक क्षेत्रका पेशाकर्मीहरूले राम्रो सफलता हात पर्नेछ । राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट पनि ख्याति कमाउन सकिनेछ । स्वास्थ्य रक्तसञ्चारमा र वायु विकारले समस्यामा पार्न सक्छ । टाउको तथा आँखाको समस्या पनि बढ्नसक्छ । परिवारको स्वास्थ्यमा धन खर्च बढ्नसक्छ, उचित परामर्श र स्वास्थ्य प्रति सजगता अपनाउनु पर्नेछ । शुभ रङ्ग सुन्तला रङ्ग, रातो, खैरो, सेतो र पर्पल शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क १, २, ३, ७ र ८ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय प्रत्येक मंगलबार गणेशजीको दर्शन पूजा, आराधना एवं पूजा गर्नाले ग्रह पीडा कम भई शुभ फल मिल्नेछ । विपन्न वर्गाका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने, खानेकुरा दिने र मान्यजनको आशीर्वाद लिनाले राम्रो हुनेछ । कुनै शुभ कर्म गर्नपूर्व या यात्रामा जानु अघि विघ्नहर्ता गणेशजीको दर्शन / पूजापछि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
धनु राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष सामान्य रहने देखिन्छ । केतुको प्रभावले कीर्ति बढेर जाने, धनलाभ हुने र बेलाबेलामा सुखको अनुभूति मिल्नेछ । शनिको साढेसाती, बृहस्पति र राहुको गोचरले भने चिन्ता, हानी, वाधा, नोक्सानी र कार्यसम्पादनमा उल्झन, बेलाबेलामा मनमा दुबिधा हुनेछ, तर घरपरिवारमा माङ्गलिक कार्य आयोजना हुनेछ, अत: मिश्रित फल पाइनेछ । व्यापार/व्यवसाय यो वर्ष आर्थिक स्तर पनि मिश्रित रहनेछ । मदिरा, प्रेस, तथा स्वास्थ्य व्यवसायीलाई राम्रो फाइदा हुनेछ । घरजग्गा, गाडी तथा मेटलका व्यवसायमा उल्झन र नोक्सानी पनि हुनसक्छ । शेयर बजार भने सुझबुझ र अनुभवमा भर पर्ने हुन्छ । पार्टनरसिपमा गरेको कार्यमा पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्छ अत: विचार पुर्याउनु पर्नेछ । आर्थिक दृष्टिले असार, साउन र मंसिर महिना राम्रो हुनेछ । प्रेम/सम्बन्ध यो वर्ष नयाँ प्रेम सम्बन्ध जोडिनेछ साथै प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुने र प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत समेत हुन सक्छ, तर जन्मकुण्डलीमा सप्तमेस कमजोर हुनेहरूलाई विवाद उत्पन्न हुन सक्छ र पारिवारिक मन मुटाब समेत बढ्न सक्छ साथै दाम्पत्य जीवनमा पनि मतभेद बढ्ने सम्भावना रहन्छ । शिक्षा वर्षको सुरुको महिनामा शैक्षिक क्षेत्र कमजोर रहन सक्छ । जति पढे पनि स्मरण गर्न गाह्रो हुने र पढाईमा ध्यानाकर्षण नहोला, तर मध्यबाट भने शैक्षिक क्षेत्र राम्रो हुनेछ । आई. टी. र शोध विषयका विद्यार्थीहरूले पढाईमा उत्कृष्ट नतिजा पाउनेछन् । कानून र वाणिज्य विषयका विद्यार्थीहरूको लागि भने यो वर्ष कमजोर सावित हुनसक्छ । पेशा/रोजगार यो वर्ष लगानी गरेको ठाउँबाट त्यति लाभ नमिल्ला, अत: लगानी गर्नु पूर्व विचार गर्नु पर्छ । रोजगाका लागि विदेश जानेहरूका लागि भने राम्रो छ । सरकारी जागिरेलाई सरुवा र बढुवाको योग पनि छ । एजेन्ट, समाजसेवा तथा राजनैतिक क्षेत्रमा समय दिनेहरूले जनताको राम्रो समर्थन प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य हड्डी, मानसिक, अनुहारमा तथा छालासँग सम्बन्ध समस्या बढ्नसक्छ र आफ्नो तथा आफ्नो हितैषीको औषध उपचारमा धन खर्च बढ्नेछ । राम्रो स्वास्थ्यको लागि खानपिन र व्यायामको नियमित अभ्यास गर्नुहोला । शुभ रङ्ग घ्यू रङ्ग, सुन्तला रङ्ग, हरियो र निलो शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क १, ३, ५, ६ र ८ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय आफ्नो ग्रह पीडाबाट बच्न र भाग्यलाई अझै वृद्धि गराउनको लागि बिहीवार विष्णु भगवानको दर्शन / पूजा गरि शाकाहारी भोजन गर्नाले राम्रो हुनेछ । प्रत्येक बिहीवार निमुखा प्राणीलाई खानेकुरा दिने र वृद्धजनलाई सहयोग गर्नाले भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । बिहीवार कै दिन केराको वृक्षारोपण र पूजन गर्नाले पनि भाग्यमा वृद्धि हुनेछ ।
मकर राशिका जातकहरूका लागि यो वर्ष मध्यम नै रहनेछ । माघ २७ सम्म शनिग्रहको साढेसातीले सकारात्मक फल नदेला । बृहस्पति र राहु पनि अशुभ स्थानमा गोचर गर्नाले पनि मनमा डर, आर्थिक उतारचढाव हुनसक्छ र नजिकका व्यक्तिसँग वादविवाद तथा दूरी बढ्न सक्छ, वर्षको मध्यमा मनमा राम्रै भएपनि अनेकौं तर्क र खुलदुली उत्पन्न हुनेछ र ठोस निर्णय लिन नसकिएला । असार, भाद्र, कार्तिक र चैत्र महिनामा बढी शुभ फल मिल्नेछ । व्यापार/व्यवसाय व्यापारीका दृष्टिले यो वर्ष सामान्य उतारचढाव हुनसक्छ, अत: धैर्यता आवश्यक छ । आस मारिसकेको र रोकिएका धन हात पर्न सक्छ । तरल पदार्थ, घरजग्गा, शृंगार र सेयरबजारबाट राम्रो सफलता मिल्नेछ । कृषि र खाद्यान्नको कारोबारमा भने मन्दी आउनेछ । आर्थिक दृष्टिले वैशाख, साउन, भाद्र र मंसिर महिना लाभदायक रहनेछ । प्रेम/सम्बन्ध यो वर्षको ग्रह गोचर हेर्दा तपाईंको प्रेम प्रसङ्गका लागि मध्यम नै रहनेछ । पुराना प्रेमी जोडीहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै पारिवारिक समर्थन मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा भने आर्थिक असमझदारीले दूरी बढ्न सक्नेछ, तर पुराना सम्बन्ध र टाढिएका व्यक्ति नजिकै हुनसक्छन् । शिक्षा यो वर्ष अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सुधार आउनेछ र मिहिनेत गरे अनुसार बढी सफलता मिल्नेछ । वर्षको पूर्वार्द्धमा रिजल्ट राम्रो नहोला, तर उत्तरार्धमा रिजल्ट राम्रै हुन सक्नेछ । भाषा, प्राविधिक तथा टेक्निकल विषयका विद्यार्थीहरूलाई अधिक सफलता मिल्नेछ । विदेश गएका विद्यार्थीहरूलाई भने अलि संघर्ष गर्नु पर्ला । पेशा/रोजगार यो वर्ष आफ्नो कार्य क्षेत्रमा झमेला आउन सक्नेछ । श्रावण महिना पछि नयाँ पेशा वा नयाँ रोजगारको अवसर आउनेछ । सरकारी कर्मचारीहरूले बढी सजगता अपनाउनु पर्नेछ । शनिको कारणले झुटा आरोप लाग्न सक्नेछ र कानूनी झमेला तथा राजनैतिक क्षेत्रमा पनि विविध समस्या र संघर्ष खेप्नु पर्ला । स्वास्थ्य प्रजनन, आँखा र नसाको समस्या बढ्न सक्छ र दीर्घकालीन औषधी सेवनको सम्भावना पनि रहन्छ । आफन्त र घरपरिवारका लागि स्वास्थ्य उपचारमा खर्च पनि बढ्नेछ । पाचन प्रणाली र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्छ, अत: खानपिनमा सावधानी अपनाउनु होला । शुभ रङ्ग कालो, रातो, गुलाबी, निलो र पहेँलो शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क २, ६, ७, ८ र ९ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय ग्रह पीडा कमगर्न शनि, बृहस्पति, राहु र केतुको ग्रह शान्ति गर्दा राम्रो हुनेछ साथै शनिबार हनुमानजीको दर्शन, पूजा र व्रत बस्नाले पनि राम्रो हुन्छ । जन्मदिन वा शनिबार बरपिपलको वृक्षारोपण गर्दा भाग्यको बढोत्तरी हुने र गरेको कार्यबाट सफलता मिल्दै जानेछ । आफ्नो जन्म बारमा शाकाहारी खाना खाने र कुनै शुभ कर्म गर्नपूर्व या यात्रामा जानु अघि हनुमानजीको स्मरण गर्नाले अधिक राम्रो हुनेछ ।
कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि यो शुभ नै रहनेछ । वर्षभरि नै बृहस्पति र राहुको प्रभावले रोकिएका अधुरा कार्यले पूर्णता पाउनेछ । घर परिवारमा शुभ र माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुनेछ । नजिकैका व्यक्तिबाट भरपूर साथ र सहयोग मिल्ने र विजय प्राप्त हुनेछ । केतु र शनिको साढेसातीले भने चिन्ता, नोक्सानी र कार्यसम्पादनमा उल्झन, बेलाबेलामा मनमा दुबिधा उत्पन्न हुनेछ अत: मिश्रित फल पाइनेछ । व्यापार/व्यवसाय व्यापार वा व्यावसायिक दृष्टिले यो वर्ष त्यति राम्रो नरहन सक्छ । जग्गाजमिनको काममा भने विवाद बढ्न सक्छ, तर कृषि, पशु, इलेक्ट्रोनिक र कपडाको व्यवसायबाट भनेजस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ । वैदेशिक क्षेत्रमा लगानीका लागि समय राम्रो छ । सेयर बजार पनि त्यति राम्रो नहोला । आर्थिक दृष्टिले वैशाख, साउन, मंसिर र माघ महिना बढी सकारात्मक हुनसक्छ । प्रेम/सम्बन्ध यो वर्ष प्रेम गर्न चाहनेले नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन्, तर प्रेम सम्बन्धलाई परिवारले समर्थन गर्न गाह्रै पर्ला । घर परिवारमा हुने शुभ तथा मांगलिक कार्यले बिग्रिएको पारिवारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनेछ, शत्रुसँग सम्बन्ध सुल्झन पनि सक्छ । शिक्षा शिक्षाको लागि यो वर्ष सफल र फलदायी नै रहने भएकाले राम्रो नतिजा पाइनेछ । पढाई लेखईको लागि विदेश जाने योग पनि छ । चिकित्सा र डिजाइनका विद्यार्थीहरूलाई बढी सफलता मिल्ने देखिन्छ । भाषा र गणित विषय भने कमजोर रहनसक्छ । पेशा/रोजगार यो वर्ष नयाँ रोजगार वा व्यवसायको सुरुवात हुने राम्रो योग रहेको छ । सामाजिक, वैदेशिक, राजनैतिक तथा कूटनैतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई निकै राम्रो हुनेछ, तर अपजसको सामना भने गर्नुपर्ला स्वास्थ्य वर्षको उत्तरार्धमा स्वास्थ्यमा सुधार आउने र पुराना रोग काम हुन सक्छ । शनि र केतुको कारणले अस्पताल सम्मको यात्रा गर्नुपर्ला । वायु विकारका साथै रक्त सम्बन्धी समस्या बढ्ने भएकाले आफ्नो खानपिन र स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला । शुभ रङ्ग रातो, सेतो, निलो र पहेँलो शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क २, ३, ७, र ९ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय शनिबार दुर्गाजीको दर्शन, उपासना र आरधना गरि गरेको कार्यबाट अधिक लाभ मिल्नेछ । प्रत्येक शनिबार संकटा मन्दिरमा दियो बाल्ने र असहायलाई सहयोग गर्दा राम्रो हुनेछ । केतु र शनिको शान्ति गर्ने र वृक्षारोपण गर्नाले पनि ग्रह पीडा कम हुनेछ । कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि दुर्गाजीको स्मरण गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ
मीन राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष राम्रै फल मिल्नेछ, यश, कृति, लाभ, विजय, वाक्सिद्धि हुने र आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । बृहस्पति र राहुको कारण जातकहरूलाई गरेको कार्यमा उल्झन, ढिलासुस्ती, काम बिग्रने र चोटपटकको भय रहनेछ, तर जन्मकुण्डलीमा शनि लगायत अन्य ग्रह राम्रो हुनेहरूका लागि शुभ फल मिल्ने, विद्या र बुद्धिको विकास हुने र चमत्कारी ढङ्गले सफलता दिलाउनेछ । व्यापार/व्यवसाय यो वर्ष व्यापार व्यवसायबाट राम्रो सफलता मिल्नेछ । एजेन्ट, सजावटी, जग्गा जमिन र मोटरगाडीबाट चमत्कारी लाभ मिल्नेछ । सेयर बजार अन्तर्गत बिमा र बैङ्किङ क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी हुनेछ । कृषि व्यवसायबाट बढी सफलता पाइनेछ । आर्थिक दृष्टिले जेठ, भाद्र, मंसिर र माघ महिनामा बढी लाभ हुनेछ । प्रेम/सम्बन्ध प्रेम र मित्रताको बन्धन सामान्य रहनेछ । पुराना र टाढिएका मित्रसँग गोपनीय ढंगले सामीप्यता बढ्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा माया प्रेम एवं समझदारी भने कायम नै रहनेछ । शनि कमजोर रहने जातकहरूलाई वाणीमा लगाम लगाउन आवश्यक देखिन्छ, अन्यथा जुनसुकै सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्छ । शिक्षा विज्ञान र सामाजिक विषयका विद्यार्थीहरूलाई बढी सफलता मिल्नेछ । भाषा, स्वास्थ्य विषय तथा शिक्षाको लागि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई भने यो वर्ष त्यति राम्रो देखिन्न, अत: विद्यामा सफलता पाउन बढी मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । पेशा/रोजगार यो वर्ष नयाँ कार्यको थालनी र गरेको लगानीले राम्रो सफलता पाउनेछ । वैदेशिक रोजगार भने सामान्य नै रहनेछ । सञ्चार, बिलासीता तथा मनोरञ्जन पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई भने बढी सफलता मिल्नेछ । पर्यटन र कृषिको लगानीमा भने झमेला र समस्या बढ्न सक्छ । स्वास्थ्य यो वर्ष स्वास्थ्यमा उतार चढाव आउन सक्छ । नयाँ रोग देखा पर्नाले अस्पतालको यात्रा गर्नु पर्ला, त्यसैले खानपिनमा सावधानी र नियमित व्यायाम गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नासा तथा प्रजननमा पनि सामान्य समस्या बढ्न सक्छ । शुभ रङ्ग रातो, गुलाबी, कालो, पहेँलो र खैरो शुभ रङ्ग हो । शुभ अङ्क १, २, ६, ८ , र ९ शुभ अङ्क हो । दर्शन/पूजा/उपाय प्रत्येक शुक्रवार लक्ष्मीजीको दर्शन, पूजा र उपासना गर्नाले ग्रह पीडा कम भई समृद्धि मिल्नेछ । असहायलाई खुसी पार्नसके आकस्मिक सफलताहरू मिल्नेछन् । आफ्नो जन्मवार शाकाहारी भोजन र रोगीहरूको उपकार गर्नाले पनि सफलता मिल्नेछ । आफ्नो सत्कर्म गर्ने र सत्य बोल्दिनाले पनि ग्रह पीडा कम हुने र भाग्यमा वृद्धि हुने�